Falanqayn: Wasiirada cusub ee Puntland maxay uga duwanyihiin kuwii hore? (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 11, 2019 6:43 g 0
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay magacaabay Gole Wasiiro oo ka kooban 18 Wasiir, halka xukuumadii hore ee Cabdiwali Cali Gaas ay ka ahaayeen 19 Wasiir.
Haddaba waa maxay howlaha horyaala Wasiiradan? Maxay se uga duwanyihiin kuwii hore ? Su’aalahaas iyo kuwo kale waxaan hordhignay Barafasoor Nuur Salaad oo bare ka ah Jaamacada Badda Cas ee magaalada Bossaso.
Madaxweyne Farmaajo iyo shir-madaxeedkii 32aad ee qaaradda Afrika (sawirro)